August 2018 – Page2– Nagarik Network
कसरी हुन्छ हुन्छ मस्तिष्क घात?
मस्तिष्कमा रहेका नसाहरु सुक्दा, फुट्दा, खुम्चिदा वा तिनले राम्रोसँग काम नगर्दा स्नायु तन्तुहरुमा अक्सिजन आपूर्ति रोकिन्छ र मस्तिष्कले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनु नै मस्तिष्कघात हो।
नियमित ब्यायाम नगर्दा, खानपानमा उचित ध्यान नदिँदा, वातावरणीय प्रतिकुलता हुँदा र बंशाणुगत कारणले मस्तिष्कघात हुने गर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका नसा रोग विभाग प्रमुख डा. रागेश कर्णका अनुसार दैनिक रुपमा टेबलवर्क गर्ने, ब्यायाम नगर्ने, मदिरा र चुरोट सेवन गर्ने मानिसहरु मस्तिष्कघातको उच्च जोखिममा हुन्छन्।
उनका अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा बस्ने मानिसले प्रत्यक्ष धूम्रपान नगरेपनि दैनिक दुइवटा चुरोटबाट निस्कने धुवाँ वराबरको धुलो ग्रहण गरिरहेका हुन्छन।
अरुले गरेको धुम्रपानको असर भोग्ने प्यासिभ स्मोकर र धुलो धुवाँले प्रभावित काठमाडौ उपत्यकामा हरेक मान्छे मस्तिष्कघातको जोखिममा रहन्छन।
‘काठमाडौ उपत्यकामा धुलो धुँवा अत्याधिक छ, धुम्रपान गर्ने र प्यासिभ स्मोकरको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दैछ जसले मस्तिष्कघातको खतरा पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने।
विश्वभरमा प्रत्येक ६ मानिसमध्ये १ जनालाई जीवनकालमा एकपटक मस्तिष्कघात हुने गर्छ। विश्वस्थास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार हरेक बर्ष डेढ करोड मानिस मस्तिष्कघातको सिकार हुने र ५८ लाख मानिसको ज्यानै जाने गरेको छ।
डेनी चार्ल्ड मलाई मन पर्छ’ – मरिस्का पोखरेल
म तिम्रो होइन र’ नामक चलचित्रबाट चलचित्रमा प्रवेश गरेकी लोकप्रिय नायिका हुन् मरिस्का पोखरेल। ‘चपली हाइट २’, ‘लम्फु, पण्डित बाजेको लौरी’ लगायत आधा दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी मरिस्का पोखरेलले आफूलाई प्रिय लाग्ने कुरा नागरिक परिवारलाई यसरी बताएकी छन्।
रेडियो नेपालसँग खुमलटारबासी रुष्ट
रेडियो नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खुमलटार ट्रान्समिटिङ स्टेशनको करिब ७० रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएपछि स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारी र व्यापारिक मिलोमतोमा उक्त जग्गा हड्पने काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
उक्त जग्गा मध्येको ४२ रोपनी जग्गा लामो समयदेखि स्थानीयले खुल्ला चौरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर त्यो जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएपछि स्थानीय जनता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रेडियो नेपालले एक बर्ष अघि नै प्रति महिना प्रति रोपनी ४१ हजार ५१ रुपैयाँका दरले ३० वर्षका लागि श्री कुबेरज्ञान हाउजिङ कम्पनी प्रालि.लाई भाडामा दिएको भएपनि उक्त कम्पनीले स्थानीयको विरोधका कारण सो जग्गा प्रयोग गर्न सकेको छैन। स्थानीय बासिन्दाले उक्त जग्गा रेडियो नेपाल स्वयंले प्रयोग गर्नुपर्ने नभए त्यतिकै खुल्ला छोड्न माग गर्दै आएका छन्।
ललितपुरमा गोदावरी खोलाले मान्छे सहित कार बगायो
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–८ लुभूमा गोदावरी खोलाले मान्छे सहित एक कार बगाएको छ। आज बिहान ५ बजेतिर बा १४ च ४७२९ नम्बरको कार नदी पार गर्ने क्रममा बगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शी पूर्ण श्रेष्ठका अनुसार स्थानीयले कार चालकको उद्दार गरेका छन्। कार चालक सुरक्षित रहेको ललितपुर प्रहरीले बताएको छ।
महानगरपालिकाले नयाँ पुल बनाउने भन्दै ह्यामपाइप राखेर आवागमनको व्यवस्था गरेकोमा नदी पार गर्ने क्रममा कार खोलाले बगाएको श्रेष्ठले बताए।
‘पुल बनाउने भन्दै नगरपालिकाले पुरानो पुल भत्काएको सात आठ महिना भइसक्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘अझै पनि पुल बनेको छैन, स्थानीय जोखिम मोलेरै खोला वारपार गरिरहनु परेको छ।’ उनले जोखिम पूर्ण यात्रा गर्नु पर्दा ठूलो दुर्घटनाको सम्भावना कायमै रहेको बताए।
प्रहरीले कार नदीबाट झिक्ने प्रयास भइहेको बताएको छ।
जाजरकोट पहिरो अपडेट : नाै जनाकाे शव भेटियाे, उद्दार कार्य जारी
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ ठाटिबजारमा गएको पहिरोमा परी पुरिएका मध्ये नाै जनाकाे शव फेला परेको छ।
मृत्यु हुनेमा १३ वर्षीय नरेन्द्र परियार, ११ वर्षीय नविन परियार, ८ वर्षीय गाेविन्द परियार, ८ वर्षीय दर्शक परियार रहेका छन्। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटका सदस्य तिर्थ बहादुर बोहराकी ८ वर्षीया छोरी नज्मा बाेहराकाे पनि पहिराेमा पुरिएर मृत्यु भएकाे छ। यस्तै मृत्यु हुनेमा २५ वर्षीया तिर्सना सितला लुहार, उनकी छाेरी ९ वर्षीया भगवति बिक, ६ वर्षीया रञ्जना बिक र ३ वर्षीया मनिषा बिक रहेका छन्। पहिराेमा परी सितलाका श्रीमान ३१ वर्षीय लालबहादुर लुहारकाे घाइते अवस्थामा उद्दार गरिएकाे छ भने उनकाे जाजरकाेट अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ।